Mikarakara Fotoan-dehibe ho An’ny Rehetra ny Vavolombelona ny 2017
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Japoney Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
30 MARTSA 2017
Mikarakara Fotoan-dehibe Maromaro Azon’ny Rehetra Atrehina ny Vavolombelon’i Jehovah Amin’ity 2017 Ity
NEW YORK—Asain’ny Vavolombelon’i Jehovah ny olon-drehetra mba hanatrika ny fotoan-dehibe hokarakarainy amin’ity taona ity.
Hankalaza ny Sakafo Harivan’ny Tompo na koa hoe ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany, amin’ny talata 11 Aprily 2017. Horaisin’izy ireo an-tanan-droa izay rehetra tonga hanatrika azy io. Tamin’ny asabotsy 18 Martsa 2017 izy ireo no nanomboka nanao ezaka manokana hanasana olona faran’izay betsaka, mba hanatrika an’ilay fotoan-dehibe. Hifarana amin’ny 11 Aprily 2017 izany. Hita ao amin’ilay fanasana zarain’izy ireo hoe aiza ny toerana hanaovana an’ilay izy eo an-toerana. Io no fotoan-dehibe miavaka indrindra ao anatin’ny taona amin’ny Vavolombelona.
Mbola hisy lahateny ara-baiboly hatao ny 15 na ny 16 Aprily 2017, any amin’ny ankamaroan’ny efitrano fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. Maharitra 30 minitra ilay lahateny ary izao no lohateniny: “Miezaha Hitandro Fihavanana na dia Mora Tezitra aza ny Olona.” Ny olon-drehetra no asain’ny Vavolombelona hanatrika azy io.
Manao fivoriamben’ny vondrom-paritra maharitra telo andro ny Vavolombelon’i Jehovah isan-taona. Hanomboka ny 19 Mey 2017 izy io amin’ity taona ity, ary mitondra ny foto-kevitra hoe: “Aza Kivy!” Any Etazonia no hanomboka ilay fivoriambe, ary avy eo hatao any amin’ny toerana maro maneran-tany hatreo am-piandohan’ny 2018. Hanasa ny olona hanatrika an’ilay fandaharana ny Vavolombelona, roatokombolana alohan’ny fivoriambe tsirairay.
Tsy misy vidim-pidirana daholo ireo fotoan-dehibe ireo sy ny fivoriana rehetra ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah. Asaina ny fampitam-baovao mba hifandray amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah eo an-toerana, satria hanampy azy ireo hanao tatitra momba an’ilay fotoan-dehibe izany.